Amabhange Commercial - iyithuluzi sendalo noma ingcebo?
Ezithintiwe phezu isimiso ayikwazi ethulwa ekhasini elilodwa kutheksthi lebhaliwe. Ngakho-ke, thina kuzobonisa kwendikimba futhi kusele izingxenyana nje ze okuhlangene isitokwe yasebhange yentengiso ukutshalwa kwezimali angaphandle. Ingabe njalo amabhange bayatfutfuka noma ngokuvamile phansi (ezicashe ezimibalabala ukukhangisa amapheshana)? Ingabe isiphetho izikhungo ithengiswe indaba yakho wedwa kodwa umthengi? Ingabe akhona ukwengamela Central Bank imisebenzi tebaphatsi labasetulu yebhange commercial?
ukukhanyisa Quick indima komnotho omkhulu
Umnotho wezwe ubuswa ezimbili-mbili sokusabalalisa yasebhange, eliholwa central amabhange kahulumeni. Izinga lokuqala liqukethe ngamabhange - ejenti Amatebhe we yesimo sezomnotho. Ngaphansi kokuqondisa futhi ngokubambisana neNhlangano Central Bank of lizwe eyenziwa imisebenzi ngamabhange. Ikhishwa lwemali (ukheshi kanye noncash). Elibalulekile kwezomnotho umsebenzi ngamabhange uboleka amabhizinisi kanye nasemakhaya. Ziyakwazi ngaphansi kokulawula Central Bank yezwe eyenziwa ukuguqulwa lwemali. Ngamanye amazwi, ngamabhange - iyona "workhorse" kohlelo lwezezimali, ngoba ukukhiqiza ingxenye enkulu Imininingwane ukuphathwa cash amasevisi umnotho, ukugcinwa ukulandisa okuningi kwalezi amaklayenti abo.
I "okubi" ukuphathwa angaphandle. isu lakhe
ifomu okuhlangene isitokwe yenhlangano commercial amabhange ngokuvamile kuhilela ukuthengwa esigxotsheni elilawulayo bezinhlangano ezinkulu yasebhange angaphandle. izimakethe zethu, beze ngenxa eziphezulu zenzalo - isikhonkwane eyinhloko "ezishibhile" futhi "ezibizayo" imali. imali yethu - super-ezibizayo. amabhange yethu commercial - a Klondike wangempela ukuze uthole inzuzo ubhekene nenkinga yezimali. Ake sithi commercial "A" ebhange nge izifunda inethiwekhi amagatsha 500, uye waba "indodakazi" yeqembu yasebhange angaphandle. Indlela cabanga izinsongo kungenzeka izinhlelo zamabhange akuleli? Kuphethe ukudayiswa, kubalulekile ukusungula amazinga abaphathi ezanele ahlengwe impahla eziyinkimbinkimbi.
Bad lapho ukuhaha idlula ithalente
Bank - isakhiwo iyashesha ukuthinteka, futhi-ke kufanele kuthuthukiswe nabaphathi ezanele. Ngesizathu esithile, amabhange amakhulu avunyelwe ukukhukhuleka merchandising. Lena iphuzu elibaluleke kakhulu. ukuhlela Imphumelelo ngamabhange - usongo ubuqotho uhlelo yasebhange. Lapha zonke tricks zinhle: ngokwesibonelo, umonakalo omkhulu iqashwe. Kulokhu, umphathi angaphandle uthola konke akudingayo - yesikhathi esifushane inzuzo. Kodwa abaphathi angaphandle ungacabangi mayelana ubuqotho uhlelo lwethu yasebhange, futhi endaweni wabo wemfanelo kuvumelana eside yesivumelwano. Lokhu ngenhlanhla kuyinkinga ngamazwe.
Ungakhohlwa ukuthi ngamabhange - kukhona abaqashi ezinkulu, ukuhlinzeka amakhulu ezinkulungwane engenayo emndenini. Kodwa yahlukanisa "A" abasebenzi yasebhange abangasebenzi, futhi "indodakazi" buthaka, ukulahlekelwa komunye "workhorse" phakathi kwamagatsha awo. Futhi lapha ebhange yethu "A" ekupheleni ngekota usike Amahhovisi enjalo 20. Phakathi kweminyaka emithathu besebenza enjalo nje kwesigamu Amahhovisi bazosala inzuzo enhle. Lapho Central Bank? He is futhi akayena ongangeneki.
Izinkomba professional ukuhluleka ukuphathwa
Ukugxila ngokweqile kubaphathi inzuzo ngoba umphathi zazo zakwamanye amazwe akufanele kube umgomo oyinhloko ukunciphisa ukukhanga yamanani yebhange. Umgomo we amazinga non-eziya ziba zimbi kungenziwa ngempela bargained ngoba lapho ukuthengisa inhlangano. Phela, amabhange yasekhaya commercial - isakhiwo ekuqaleni akufanele izinga lekhwalithi yayo.
Ibhange emaphakathi futhi isimo kufanele sibe nesithakazelo isizathu sangempela esenza konke okungazelelwe a ezifakwa ibhange zibe nesithakazelo sabo ukukhumbuza akhawunti zamanje kanye loans babé Inhloso-non-ukuncintisana. Esikhathini isikali isimo umthwalo siqu ukuphathwa phezulu ngoba Ukuwohloka izinga yamanani yasebhange kumele ithuthukiswe - ngesisekelo ekuthuthukiseni wayo nezimpawu ngokweqile "ecindezela" kwezimali ebhange, ukwephulwa ukuvumelana kwalo. Uma abaphathi sekubangele Ukuwohloka isimo Inhloso yasebhange "A", kunengqondo we-Central Bank kufanele asizakale ngempela ukuze nginqande leso simo.
Ephetha isihloko, ngifuna uqaphele ukuthi ngamabhange - kulesi sikhungo nsuku zonke futhi laqonda ukuzikhandla kanzima ukwenza uhlelo lwezimali isimo nokuwenza athuthukile.
Mortgage refinancing, "Gazprombank": Izibuyekezo
Kumiswa iphothifoliyo izibambiso, izimfanelo izibambiso nemisebenzi yasebhange utshalomali kulesi siqondiso.
Amabhange kahulumeni Russian njengoba yisiboniso umnotho wezwe uzinzile
Mortgage nokusekela isimo: Sberbank eRussia. Impendulo mayelana nohlelo nemibandela iqhaza
Indlela uxolise intombazane?
Yini kufanelekile roll ushizi?
Itiye Green kubangela isifo sokusha kwesibindi kohlobo?
Yini umqondo wegama elithi "abantu elibolile"? Ngubani umuntu ezibolile?
Lada Granta: ukubuyekezwa abanikazi kanye Ukucaciswa
Yini lifana ncamashi ngendlela yesimanje?
Indlela sifake imicu ye choker nokudoba?
Kohler ushukela - kukhiqizwa futhi kusetshenziswa ukudla udayi owaziwa
Imisebenzi yangemva kwesikole esikoleni sabaqalayo: iskripthi. imisebenzi engaphezulu-curricular ngoba esikoleni samabanga aphansi
I ithelevishini yokuqala e-USSR - mechanical, electronic futhi non-ayoni